OnePlus 6: ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ | Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | OnePlus
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော OnePlus သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ OnePlus 6, OnePlus5နှင့် 5T ၏ဆက်ခံအကြောင်းပြောဆို, အတွင်း၌တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုထုတ်ကုန် ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အင်အားအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
OnePlus6သည်ဖော်ပြပြီးသောနှစ်ခုကိုအစားထိုးရန်ရောက်လာလိမ့်မည် ၎င်းကိုသူ့ဟာသူတောက်ပစေရုံသာမကအခြားဆိပ်ကမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းပါ ၀ င်စေလိမ့်မည်။ Qualcomm SD845 SoC တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုငြူစူရန်မလိုပါ။ အများစုကို၎င်း, အဖြစ်ကကမ်းလှမ်းသောအခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များမှ ဒီနှစ်မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ကိုင်ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခု။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ catalog အသစ်၏ဤအဖွဲ့ဝင်သစ် ၎င်းသည်ကြီးမားသော ၆.၂၈ လက်မ FullHD + AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် ၂၂၈၀ x ၁၀၈၀ ပစ်ဇယ် resolution တို့ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပါးလွှာ။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပုံမှန်မဟုတ်သော ၁၉: ၉ panel ပုံစံဖြစ်သည်။ ဒီမျက်နှာပြင်ဟာ notch design နဲ့အတူပါရှိပါတယ်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Apple ကုမ္ပဏီမှ iPhone X တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဖက်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသည် "ကူးယူပြီးပြီ" သူတို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်။ ၎င်းအပြင်ထို့အပြင် screen မျက်နှာပြင်ကိုခြစ်ရာများ၊ ပြောက်များနှင့်ကျဆုံးမှုများမှကာကွယ်ပေးသည့် Corning Gorilla Glass5ဖန်သားပြင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ဒီအသက်နှင့်အာဏာပေးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း phablet ကို, OnePlus6သည် octa-core Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်သည် 4-bit ဗိသုကာနှင့် 385nm အတူ Adreno 2.8 GPU နှင့်အတူလေးလံသောနှင့်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများကို multimedia အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းများကို run ပါလိမ့်မယ် (4 Kyro 385 1.8GHz နှုန်းနှင့် 64x Kyro 10 630GHz မှာ) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းချစ်ပ်သည် ၆ / 4GB LPDDR6X RAM နှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်သည်။ Internal memory 8/64 / 128GB နှင့်၎င်းမိုဘိုင်း၏မီးများကိုဖွင့်ပေးမည့်ဘက်ထရီသည် ၃,၃၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်သည်။ လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း 256+ မြန်သောအားသွင်းခြင်းပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ။
ဓာတ်ပုံပြသမှုတွင်၎င်းတွင် focal aperturef/ 519 နှင့် Optical Image Stabilization (OIS) ပေါင်းစပ်ပါ ၀ င်သည့် 16MP Sony IMX1.7 ပင်မနောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်f/ 376 aperture နှင့် dual-LED Flash ပါသည့် 20-megapixel Sony IMX1.7 အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။ ရှေ့၊ ၎င်းတွင်f/ 371 aperture ပါဝင်သည့် 16-megapixel Sony IMX2.0 သေနတ်သမားကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည် selfie ရိုက်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည့်အပြင်၎င်းအတွက်လည်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည် မျက်နှာသော့ဖွင့ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Oxyo OS အောက်တွင် Android 8.1 Oreo ကိုအသုံးပြုသည်၎င်းတွင်ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာများ၏အောက်ဘက်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ microUSB 2.0 Type-port, ၃.၅ မီလီမီတာဂျက်၊ dual-nano-SIM ထောက်ပံ့မှု၊ WiFi 3.5a/b/ g / n / 802.11 / 2.4GHz dual-band ac၊ MiMO 5x2, Bluetooth 2, NFC နည်းပညာနှင့် GPS, GLONASS, BeiDou နှင့် Galileo ပါဝင်သောအားကောင်းသော positioning system.
1 OnePlus ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအကျဉ်းချုပ် 6
2 OnePlus6စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
OnePlus ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအကျဉ်းချုပ် 6
မျက်နှာပြင် ၆.၂၈ လက်မ FullHD + AMOLED (6.28ppi) ၂,၂၈၀ x 402-pixel resolution (2.280: 1.080) နှင့် Corning Gorilla Glass 19
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 845 octa-core (4x Kyro 385 2.8GHz နှုန်းနှင့် 4x Kyro 385 1.8GHz နှုန်း) 64-bit architecture နှင့် 10nm
ရမ်6/ 8GB
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 64 / 128 / 256GB
ချမ်ဘာ နောက် - dual-519 megapixel,f/ 16 SONY IMX1.7 sensor ၁.၂၂μm ရှိ OIS + SONY IMX1.22K သည် 376 megapixels ရှိသော aperturef/ 20 နှင့် pixel size 1.7mm ပါဝင်သည်။ မျက်နှာစာ 371 megapixel Sony IMX16 sensor နှင့်f/ 2.0 aperture နှင့်1.0μm pixel အရွယ်အစားရှိသည်
ဘက်ထရီ လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း 3.300+ မြန်သောအားသွင်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် 4mAh စွမ်းရည်
OS Oxyo OS အောက်ရှိ Android 8.1 Oreo
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်လက်ဗွေဖတ်စက်။ 4K မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ နှစ်ချက် Flash LED ။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု။ WiFi2×2MIMOa/b/ g / n / ac ။ Bluetooth 5.0 + A2DP နှင့် aptX HD ။ microUSB အမျိုးအစား -C ကို 2.0 ။ NFC နည်းပညာ။ ဂျီပီအက်စ်။ GLONASS ။ BeiDou ဂယ်လီလီယို ခန်းမ Accelerometer Gyroscope ။ နီးကပ်။ သံလိုက်အိမ်မြှောင်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်း။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု။ Dual SIM ပံ့ပိုးမှု
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 155.7 x ကို 75.4 x ကို 7.75mm ။ ၁၇၇ ဂရမ်
OnePlus6စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ဒီပစ္စည်းကိုမေလ ၂၂ ရက်မှာရောင်းလို့ရပါတယ် ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမေဇုံမှသော်လည်းကောင်း၊ သင်သည်ပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဝယ်ယူပါကနားကြပ်ကိုအခမဲ့ယူနိုင်သည်။ OnePlus6၏မျိုးကွဲများနှင့်မော်ဒယ်များအရစျေးနှုန်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
OnePlus6Mirror Black နှင့် 6GB RAM သိုလှောင်မှုနှင့်သိုလှောင်မှု 64GB: 519 ယူရို.
OnePlus6Mirror Black နှင့် 8GB RAM သိုလှောင်မှုနှင့်သိုလှောင်မှု 128GB: 569 ယူရို.
OnePlus6Midnight Black နှင့် RAM 8GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128GB ရှိသည်။ 569 ယူရို.
OnePlus6Midnigth Black နှင့် RAM 8GB နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၂၅၆ GB 619 ယူရို.
OnePlus6ပိုးဖြူသည် 8GB RAM နှင့် 128GB သိုလှောင်မှုရှိသည်။ 569 ယူရို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus 6: ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ